ANDAPA : Lehilahy 01 nanolana zazavavikely miisa 02, misandoka ho tsy salama saina
Mbola maro eto amintsika ireo karazana herisetra mahazo ny zaza amam-behivavy mampitondra takaitra kanefa dia toa vitavita ho azy noho ny fanjakazakan’ny kolikoly sy ny tsindry hazolena mahazo ny madinika. 20 février 2020
Toy ny tranga niseho tao amin’ny Fokontanin’ Antangena ao Andapa ny faha 23 janoary 2020 dia zazavavikely 06 taona antsoina hoe Nomena sy Floricia 08 taona no voaolana tovolahy iray. Potika tanteraka ireo zaza ireo rehefa nozahana tany amin’ny toeram-pitsaboana ny fahasalamany.
Raha ny nambaran’ny fianakavian’ireto zaza niharan’ny herisetra ireto moa dia nitaky vola sivy alina Ariary isan’ankizy ny mpitsabo izay vao manome ny “ taratasy fanamarinam-pahasalamana izy. Noho ny tsy fisian’ny vola teo amin’ny ray aman-drenin’ireo zaza anefa dia tsy mba nanampy koa ny fianakaviana, hany ka tsy nomen’ny mpitsabo ilay taratasy fanamarinam-pahasalamana. Maneho fitarainana araka izany ny fianakaviana manoloana ny zava-misy ary mitaraina amin’ny mpitondra fanjakana mba hijery akaiky ny raharaha satria dia mahatsiaro iharan’ny tsindry izy ireo ny amin’ny tokony handoavana io vola io izay atao an-tery mihitsy.
Voamarika ihany koa anefa fa nanambara ny fianakavian’ilay lehilahy nahavanon-doza fa lehilahy tsy salama saina io nanao herisetra io. Notsipahin’ ny fianakaviana ankilany niharan’ny fanolanana àry fa diso tanteraka izany fa zazalahy salama saina tsara ary mbola mianatra ity nahavanon-doza, fandiovan-tena fotsiny entin’ny fianakaviany hanafenana ny ratsy vitan’ity lehilahy ity izany. Manahy araka izany ny ray aman-drenin’ireto zaza voaolana sao mpiray tsikombakomba ireo mpitsabo sy ny fianakavian’ilay lehilahy nanolana mba hahavita ho azy moramora ny raharaha. Eo ny kolikoly ampanjakaina amin’ity tranga ity, hany ka ireo mpanam-bola ihany no mety handresy na dia efa hita ho tsy mety izao aza ny nataony. Manao antso avo amin’ny mpitondra fanjakana moa ny fianakaviana niharan’ny herisetra mba hanokatra izao fanadihadiana izao mba hipotran’ny tena marina.
Zazavavikely nodoran’ny nenitoany tamin’ny sigara
Herisetra nitranga tao Andapa ihany koa ity tranga ity izay anisany tranga tena naha ontsa ny mponina tao an-toerana. Nipetraka tao amin’ny nenitoany ity zazavavikely antsoina hoe “ Tence” ary dia fantatra fa iharan’ny fampijaliana matetika ilay zaza. Raha ny zava-nisy farany nahazo azy izao dia voalaza fa nodoran’ity nenitoany tamin’ny sigara ny vatany ka naratra mafy sy nampitondra takaitra ho azy. Nalefa nody tany amin’ny ray aman-dreniny niteraka azy moa ilay zaza ary efa mipetraka any amin’ny Babaomby Antsiranana izy amin’izao fotoana izao.
Marihana anefa fa dia toa vita mora ho azy ny trangana herisetra toy itony ao an-tanàna noho ny fanjakan’ny kolikoly izay efa voalaza etsy ambony. Manjaka dia manjaka ny herisetra mahazo ny zaza amam-behivavy ka ny angatahin’ny vahoaka ao an-toerana dia ny mba hijerena akaiky ny raharaha momba izany ka hanokafana ny fanadihadiana lalina. Mangetaheta ny fitondram-panjakana izy ireo mba hiditra an-tsehatra amin’ireo trangana herisetra mahazo vahana.
Lehilahy 23 taona hita faty tao an-tranony ny sabotsy antoandro lasa teo ARANTA (190) 31 mars 2020 Lavon’ny balan’ny Polisy ny jiolahy iray, karohina ny namany FIKASANA FANAFIHANA “VILLA” (125) 31 mars 2020 Vehivavy tompona Bar iray nosamborin’ny Polisy teny 67ha TSY FANARAHAN-DALANA (110) 31 mars 2020 Nirefodrefotra indray ny baomba mandatsa-dranomaso noho ny hetsiky ny mpitari-posy TOAMASINA (98) 31 mars 2020 Tafakatra 57 hatreto ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina Covid-19 FISOROHANA NY FIHANAKY NY “CORONAVIRUS” (88) 1er avril 2020 "Fahavalo tsy hita maso ny coronavirus" MINISITRA LALATIANA RAKOTONDRAZAFY (83) 31 mars 2020